Arrin kale oo sharciga la xiriirta oo dib loo eegayo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Arrin kale oo sharciga la xiriirta oo dib loo eegayo
La daabacay torsdag 8 augusti 2013 kl 10.37
Kadib ballanqaadkii wasiirka caddaaladda Beatrice Ask in baaritaan lagu habka sharci-fulinta dalka, ayey hadda soo cusboonaatey dhacdo sharciga la xiriirta oo dhacday sannadkii 1984. Arrintani waxay ku saabsan qof jarjar lagu dilay iyo dad la tuhunsanaa oo loogu yeeray ”dhakhaatiirtii qalliinka” oo looga jeedo sida gabadha korkeeda loo googooyey.
Waxay ahayd 29 sano ka hor markii meel ka mid ah Stockholm la helay meydka qof dumar ah oo inta googooyey lagu dhexridey kiish. Kadib markii baaritaan lagu sameeyey meydkaas ayaa la xaqiijiyey in ay qof dumar ah oo dhilleysi ku shaqaysan jirtey, da’deeduna ahayd 27 sano, laguna magacaabi jirey Catrine da Costa.
Baaritaanka meydkii gabadhaas kadib, waxaa la tuhmay dadkaas lagu magacaabay ”dhakhaatiirta qaalliinka” oo lagu ridey xukun. Xukunkaas markii dambe dib loogu noqday oo laga cafiyey dadkaas. Maxkamaddu waxay xukunkeeda dambe sabab uga dhigtay in xilligii dacwad dembi la oogi lahaa la dhaafay in kastoo ay caddeysey in dhakhaatiirtani ay jarjareen hilibka gabadhaan. Laakiin dhakhaatiirtani waxaa halkaask u waayey shatigii dhakhtarnimada oo markii dambe dib ula soo noqdeen kadib maxkamado kala duwan soo mareen.
Mid ka mid ah dhakhaatiirtaas oo lagu magacaabo Thomas Allgén ayaa dalbaya in baaritaan cusub la sameeyo:
- Waa ay ku habboon tahay in la sameeyo baaritaan marka laga eego jiitankii dabadheeraa oo aan soo marnay sanooyinka badan.